Yiziphi izindlela zokuthola mahhala kepha ngokuphumelelayo ukulandela ama-backlink?
Ukuthola ama-backlink ahlobene kakhulu kubalulekile ekupheleni kokusebenza kwenjini yokusesha. Bakhonza ukuphakamisa amandla omthombo wakho wewebhu emiphumeleni yokusesha. Wonke umuntu uyazi ukuthi i-Google inikeza inani elingaphezulu lokulandela i-backlinks, ukudlulisela phakathi kwabo emgwaqweni kumakhasi wewebhu.
Kunabantu abaningi abasanda kuhamba emakethe ye-digital abafuna izindlela ezilula zokwakha izixhumanisi ezibangelwayo kumawebhusayithi abo. Noma kunjalo, kude nazo zonke lezi zindlela zokwakha izixhumanisi zilandela imihlahlandlela ye-Google. Ngenxa yalokho, abakwa-webmasters abangenalwazi bangathola imiphumela emayelana ne-traffic kanye ne-rankings noma ukuthola izigwegwe ezivela kuzinjini.
Kulesi sihloko, ngingathanda ukwabelana nawe ngezindlela eziwusizo futhi ezithembekile zokuthola i-backlinks elandelayo bese uphakamisa izikhundla ekhasini lakho lemiphumela yokusesha. Sethemba ukuthi lezi zindlela zokwakha izixhumanisi zizokusiza ukuthi uthole ithrafikhi engaphezulu kusuka kuzinjini zokusesha.
Okokuqala, ake sixoxe ukuthi singayahlukanisa kanjani phakathi kokulandela futhi akukho okulandela emuva.
Ungahlola kanjani uhlobo lwe-backlink onayo?
Kuyaphawuleka ukwazi umehluko phakathi kwalezi zinhlobo zezixhumanisi ezingenayo njengoba zinenani elihlukile lokusebenza kwe-injini yokusesha iwebhusayithi.
Izixhumanisi ezilandelayo zihlanganisa izixhumanisi "zenza" kwisakhiwo sazo futhi zidlulisele ijusi lokuxhumanisa kusuka komunye umthombo wewebhu ukuya kwesinye. Ngezindlela ezinjalo, ukulandela ama-backlinks adalwe kusuka kumawebhusayithi aphezulu we-PR adlulisela izimpawu ezibalulekile kumthombo oxhunyiwe, ubonisa i-Google igunya lale mthombo kanye nenani lalabo abasebenzisi.
Ukuhlola ukuthi uthola ama-backlink noma ungayitholi, udinga ukuchofoza kuso bese ukhetha ukuhlola into. Isibonelo, ikhodi ye-HTML yesixhumanisi esilandelayo ibukeka njenge-Google, futhi ayikho i-Google.
Ukulandela izixhumanisi zangemuva kunenzuzo ngokwengeziwe esikhathini sokwakha isixhumanisi njengoba basiza isayithi lakho ukuba libeke phezulu emiphumeleni yokusesha kanye nokusiza ukuthuthukisa igunya lakho lesizinda, igunya lekhasi kanye ne-PageRank. Ngaphezu kwalokho, batshela izinjini mayelana nekhwalithi ephezulu nokuhambisana kokuqukethwe kwakho.
Izindlela zokukhulula i-PR high dofollow backlinks
ukhonza ukwenza izixhumanisi zakho zilandele emazwana kumazwana we-Commentluv avunyelwe. Ungathola amabhulogi ngokwawo ngokusebenzisa imishwana ethile ku-Google (isibonelo - "ubuchwepheshe bubeka ama-blogs," "I-Health commental blogs," "igama elingukhiye olifisayo lapha + libeke amazwana kubhulogi," nokunye okunye.
Ungakha ukwakha okulandelayo emuva kokuthunyelwe kwebhulogi. Okokuqala, udinga ukuthola okuhlobene nemiblogi yakho yemboni noma izinkundla ezivumela ukuthunyelwa kwabavakashi. Ngemuva kwalokho, udinga ukuxhumana nomnikazi webhulogi bese umcela ngokuthumela okuqukethwe kwakho ngesixhumanisi esilandelayo. Thumela okuthunyelwe kwabavakashi bakho, futhi ngaphakathi kokuthunyelwe kwakho, ungaxhuma ezinye zezihloko zakho ezintsha. Ukuze uthole amabhulogi wezivakashi eziphezulu ku-niche yakho, ungaqhuba ucwaningo lwe-Google noma usebenzise i-MyBlogGuest yokusesha yesikhulumi Source .